Gianluigi Buffon Oo Khamiista Ka Fadhiisnaya Ciyaaraha, Xusuusta Uu Garoomada Kaga Tegayo Iyo Waayihiisii Ciyaareed Oo Kooban – GOOL24.NET
Gianluigi Buffon Oo Khamiista Ka Fadhiisnaya Ciyaaraha, Xusuusta Uu Garoomada Kaga Tegayo Iyo Waayihiisii Ciyaareed Oo Kooban
May 16, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Halyeyga ruug caddaaga ah ee kooxda kubadda cagta Juventus iyo xulka Italy, Gianluigi Buffon ayaa ku dhowaaqi doono inuu gebi ahaanba ka fadhiistay kubadda cagta.
Shir jaraa’id oo uu ku qaban doono gudaha garoonka Allianz Stadium ee magaalada Turin, ayaa waxa uu Gianluigi Buffon ku shaacin doonaa go’aankiisa ah inuu ka fadhiisanayo ciyaaraha oo uu ku jiray muddo 25 sannadood ah.
Buffon oo ay da’diisu tahay 40 jir ayaa ku guuleystay markii toddobaad oo xidhiidh ah horyaalka kubadda cagta Talyaaniga ee Serie A iyo markii afraad oo isku xigta tartanka Copa Italia xili ciyaareedkan.
Buffon ayaa Juventus oo uu uga soo wareegay Parma sannadkii 2001, waxa uu u ciyaaray 640 kulan oo uu xidhnaa dharka midabka madow iyo caddaanka iskugu jira ee Juve, waxaana uu ciyaartiisa ugu dambaysa ee xirfadda kubadda cagta uu ciyaari doonaa Axadda marka ay kooxdiisu ka hor tagto Hellas Verona.
Wakiilka Buffon ayaa warbaahinta u sheegay in aan dib dambe loo arki doonin ciyaartoy la mid ah Gigi Buffon, isla markaana uu shirka jaraa’id ku shaacin doono inuu ciyaaraha ka fadhiisanayo.
Shirka jaraa’id oo la qaban doono marka ay saacadda BST 10:30 ayaa waxa kasoo qayb-geli doono taageereyaal badan oo garoonka soo buuxin doona.
Hore ayuu u shaaciyey inuu ka fadhiistay xulka qaranka Talyaaniga oo uu u ciyaaray 176 kulan markii ay ka hadheen Koobka Adduunka ee sannadkan la qabanayo, waxaase kulan sagootin ah oo lagu macasalaamaynayo loo qaban doonaa 4 June oo Talyaanigu uu la ciyaari doono Netherlands.
Buffon waxa uu ciyaaray 117 ciyaarood oo tartanka Champions League ah, waxaana uu shabaqiisa nadiif ka dhigay oo aan wax kubbad ah laga dhalinin 50 ciyaarood.
Si kastaba ha ahaatee, waxa garoomada ka baxaya oo xili ciyaareedka dambe aan la arki doonin halyey magac weyn oo ay adkayd in sahal lagu taabto shabaqiisa.